दुई लाख ३८ हजारले डाउनलोड गरे ‘नागरिक एप’ « रिपोर्टर्स नेपाल
काठमाडौँ, ५ माघ: “सञ्चार र सूचना प्रविधिको टेवा, हात हातमै सरकारी सेवा” भन्ने नाराका साथ शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको ‘नागरिक एप’ प्रति प्रयोगकर्ताको आकर्षण देखिएको छ । शुक्रबार साँझ सार्वजनिक गरेको सो एपमा सोमबार उपराह्न ४ बजेसम्म दुई लाख ३८ हजार ८०६ जना प्रयोगकर्ताले डाउनलोड गरेको पाइएको छ ।
परीक्षणको क्रममा रहेको उक्त एपमा प्रयोकर्ताको आकर्षण देखिएता पनि विभिन्न कारणले एप सञ्चालनमा कठिनाइ देखिएको पोखरेलले बताए । नागरिकता, राहदानी वा मतदाता परिचयपत्रमा रहेको विवरण गृह मन्त्रालयमा रहेको डाटामा मेल नखाएको तथा अर्काको नामको सिमकार्ड प्रयोग गर्दा प्रमाणीकरण हुन नसकेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
नेपाल सरकारद्वारा प्रदान गरिने सबै किसिमका सेवालाई डिजिटल गरी एकीकृत प्लेटफर्मबाट सेवा प्रवाह गर्ने भन्दै शुक्रबारबाट नागरिक एप सञ्चालनमा ल्याइएको हो । शुरुआती चरणमा गृह मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र राहदानी विभागमा रहेका विवरणलाई प्रयोग गरी यस एप्समा नागरिकको डिजिटल परिचय स्थापित गरिएको छ । आगामी दिनमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई जोड्ने योजना सरकारको छ ।-रासस/File Photo
‘डिजिटल लर्नि डे’को अवसरमा ‘डिजिटल शिक्षाका लागि सँगै’ कार्यक्रम आयोजना हुदै
काठमाडौं, १० फागुन । सबै विद्यार्थीहरूका लागि नवीन डिजिटल शिक्षा र पहुँचको वकालत गर्न फेब्रुअरी,
फोन आविष्कारककी प्रेमिकाको नाममा ‘हेलो’ !
फोन उठाउँदा हामी ‘हेलो’ भन्छौं नै । त्यसको चलन कहाँबाट सुरु भयो ? त्यो हामीलाई
काठमाडौं, ६ माघ । अष्टेलियाका मिडिया र प्रयोगकर्ताले अबदेखि सामाजिक फेसबुकमा समाचार सेयर गर्न नपाउने
काठमाडौँ, ३ फागुन : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा फाइभजीको फ्रिक्वेनसी निर्धारण गरेको छ । प्राधिकरणअन्तर्गत
क्यान्सर सम्बन्धित रोगहरुको समुहलाई दिइएको नाम हो । यो शरीरमा असामान्य कोषहरुको अनियन्त्रित वृद्धी विकासको
हामी सबैले क्यान्सर बाट बच्न सामान्य आधारभुत प्रयास गरेका छौ । धुम्रपान नगर्ने र यसबाट
भेनस फ्लाइट्रयाप्स एक मांसाहारी बोट हो । यसले आफ्नो खानामा किराहरु खाने गर्छ । यसले
एजेन्सी, ३० माघ । चीनको टियानवेन–१ मंगलको कक्षमा प्रवेश गरे लगतै पहिलो तस्वीर पठाएको छ
काठमाडौं, १८ फागुन । समृद्धिको यात्रामा अघि बढेको मुलुकमा पछिल्लो दुई वर्षमा आर्थिक अपराधका ठूलाठूला
घरघरमा पानी पुर्याउने करोडमाथिका आयोजना
इलाम,१८ फागुन । स्थानीय तहमा प्रतिनिधि आएपछि विकासका फड्को मारेको देखिन्छ । स्थानीय तह यतिबेला
बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्षमा शिवाकोटी निर्वाचित
बिर्तामोड, १८ फागुन । बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षमा प्रकाश शिवाकोटी निर्वाचित भएका छन् ।